Ka mid noqoshada dhinaca bulshada ee hababka tababarka farsamada - Geofumadas
Ka mid noqoshada dhinaca bulshada, hababka tababarka farsamada
Abriil, 2013 Baridda CAD / GIS, Leisure / waxyi
Toddobaadkan waxaan la hadlay mid ka mid ah wada shaqeeyahayga, waxaanan sameyneynay taariikh wax ku saabsan timo cufan oo naga qaaday nadaamka horumarinta -oo ka sii badan kii kaamil ah-.
Waxaan sharxay sida horumarinta wax-u-qabsashadeyda ay iga dhigtay inaan ka gooyo garoonka farshaxanka ee injineernimada iyo ka dibna bulshada; marwalba raadinaya sida loo helo sirta farsamada casriga ah. Mid ka mid ah gabagabadii uu iigu xusuusiyay erayga uu ku akhriyay halkaa, in aqoonyahanka aan wax qorin ee mustaqbalku uu noqon doono kuwa aan iska indho-tiri karin isbedelka.
Haddii ay jirto faa'iido bulsheed, waa inaad barato wax badan oo ku saabsan sida dadka loo fahmo. Haddii aan dooneyno in aan ka shaqeyno nidaam farsamo, maamul ama horumarineed; Ogaanshaha sida dadku u shaqeeyaan waa muhiim. Xaaladdan waxaan rabaa in aan tixraaco hababka wax barista; habka aan ku dhuftay qoraalka fasalka aan anigu ku barto oo aan ku daro maqaal kale oo dheeraad ah goobta aan ku qoro si joogto ah.
Sidee ayey muhiim u tahay maamulka bulshada iyadoo la adeegsanayo habka baridda - barashada?
Waxaa suurtogal ah in mid ka mid ah sababaha ay uhaysteen injineerada inay noqdaan macalimiin xun sababtoo ah waxay arkeen tusaalooyin yar oo ah hababka wanaagsan ee loo isticmaalo. Waxaan xusuustaa in aan haysto macalimiin dhakhtar ah laakiin leh awoodda liita inay gudbiso; tusaale ahaan, mid ka mid ah kuwa ka xumaaday sababtoo ah waxaan ugu yeeray macallin.
- Waxay igu qaadatay sannado 11 si aan u helo injineernimada, sayidyadeeda iyo dhakhaatiirta. - Wuxu yiri - haddaba fadlan ha iga hoos dhigin heerka macalinka.
Qadar macquul ah oo talooyin ku dhalatay mashaakilaadkaas ayaa naga dhigtay inaan u maleyneyno inay yihiin injineeriyiin ahaan waxaan nahay fasal aad u sareeya oo ku yaala dhinaca horumarinta; jahawareerka doorka aqoonta iyo aqoonsiga. Inkasta oo aan barannay inaan codsanno macluumaadka aan shaki ku jirin, haddana aan fahmeynin dabeecadaha hoose ee isku-kalsoonaanta leh ee ku jira laf-dhabarka iyo is-dul-qaadku waxay naga qaadi karaan kala bar nolosha.
Sidaas darteed haddii ay Professor duurka injineernimada ma ku adkaysanayaan in kabo tababarka barbaarinta, waxay yeelan doonaan xadeynta waaweyn ee gudbinta aqoonta iyo daaweynta ardayda sida macaamiisha ka mid ah adeeg. Inkastoo aan caddaynayo in qaar ka mid ah ay ku dhasheen macalimiin, kursigiisuna si aad ah ayuu u fiicnaa.
In dhamaadka, waxbariddiisa waa ku wanaagsan yahay farsamada ah, laakiin baaxadda ayaa weli ku jira heerka dhaqanka halka lahayn horumarkooda barashada dhinaca xun ee waxbaridda positivist iyo ku dayashada kala duwan iyo barashada meelaha codsatay in cilmi nafsiga dabeecadda kuwaas oo waxbarasho dheeraad ah oo sida arkaan geedi socodka in badeecad fudud.
Maxay dadka u bartaan?
Dareenkeyga wuxuu galay barashada farsamada bilaabay markii aan wax baray Koorsada AutoCAD. Waa inaan qirsanaa in khaladaadka uu dhammaaday, ku dhowaadba sida badan ee dulqaadka qandaraaslahayga.
Waa hal shay oo lagu dhiso qoraal habraaceed iyo mid kale si loo hubiyo in rajada ardaydu ku qancaan sida waafaqsan ujeedooyinkayaga. waxyaalaha complicating geedi socodka ka mid ahaa: ayaa ardayda u yimid oo kaliya inuu la kulmo looga baahan yahay si ay u bartaan qaababka cusub ee AutoCAD ka version hore, kuwa kale waxa ay ku qaadatay, sababtoo ah waxay la filayaa in ay raacdayso sida il dakhli, dhallinyarada caataysnaa la Internet mishiinka iyo dadka waaweyn oo si fudud u maareyn kara gawaarida jiirka.
Sidaa daraadeed empiricism wuxuu iila jeeday inaan galo dimoqraadiyada dhismaha, barashada 32 ee aad adigu ka sameyn kartid qorshayaasha guri; oo ka tagaya dhinacyadii ugu dambeeyay ee adag sida warqadda goobta iyo 3D. Ugu dambeyntii kadib markii uu soo celiyay marar badan ardaydu waxay barteen inay isticmaalaan AutoCAD mana aanan bartay sida dadku wax u bartaan, ama sida loo baray sababta ay dadku u bartaan.
Qaar ka mid ah tani waxay ku lug leedahay akhrinta wax badan, ka soo baxa podium oo aqbalaya in ardaygu yahay aqoonyahanka aqoonta u leh dhisida aqoon cusub. Iyadoo lagu saleynayo aqoonta hore ee ardayda, waxaa la higsadaa si ardaydu u maamulaan inay dhisaan aqoon cusub oo muhiim ah, iyagoo noqonaya kuwa ugu muhiimsan ee waxbarashadooda, -inkasta oo ay sheegtay in ay tahay mid sahlan-.
Laakiin waa sidaas; Dadku waxay bartaan sababtoo ah waxay helayaan waxsoosaar iyo horumarka ay helayaan. Waxay bartaan sababtoo ah waxay ogtahay in xogta cusubi ay leedahay iskudhaf ah oo ay ku xiran tahay. Waxay bartaan sababtoo ah iyada oo aan loo dhigin waxbarid shakhsi ahaaneed, dano shakhsi ahaaneed ayaa dhaqaajiya
Siddee hababka barashada wax loo baro
Fahmidda dadka waa mid ka mid ah isbedelada aan dib u dhicin ee isku dhafka oo hadda ku jira da'da macluumaadka. Suxufiyiinta Digital isagoo aan xirfad ka dhigtay leeyihiin akhristayaasha badan yihiin kuwa dhaqanka, aan maxaa yeelay, waxay leeyihiin blog a caan ah, oo aysan aheyn inay ku qaataan ku xayiran shabakadaha bulshada, laakiin maxaa yeelay waayo-aragnimo ayaa ka dhigay inay fahmaan tacsida akhristayaasha sida dadka.
Barta waxbarashada, wax la mid ah ayaa si tartiib tartiib ah u dhici doona. Waqtiga ayaa iman doona si ay u iibiso buug ku saabsan sida loo barto AutoCAD waxay noqon doontaa ganacsi jahawareer ah, maxaa yeelay Internetku wuxuu xoojinayaa macluumaadka ku filan inuu barto. Caqabadaha waxbarashadu waxay noqon doonaan in ay ogaadaan sida loola socdo macluumaadka, ku-haynta guuritaanka jaaliyadaha barashada si ay u helaan boosaska maamulka ee waxtarka leh; Caqli gal ah in shaki la'aan noqon doonto mid fudud.
Dadku waxay bartaan AutoCAD iyada oo loo marayo fiidiyowyada YouTube-ka waxay abuuri karaan waxyaabo aan ka jirin kuraasta dhaqameed, laakiin ma jirto wax kale oo ka duwan sidii loo waafajin lahaa xaaladdan. Dimoqraadiyadda aqoontu waxay leedahay halis, laakiin mar kasta oo ay dhacdo waxaa jiray kacdoon muhiim ah oo dunida ka dhacay. Waxay u muuqataa in la arko waxa dhici doona mid ka mid ah in uu yimaado meesha lagu magacaabo "da'da macluumaadka."
Gebogebadii, natiijo ka keeni doonaa furfurnaan macluumaadka in hadda noqoneyso warbaahinta digital noqon doontaa guul kuweyn in hadda aan la garaneyn. Laakiin dhab ahaan ugu yimid dalabka iyo baahida ah in la fahmo dadka u horseedi barayaasha si uu u doondoono qalab fiican, farsamooyinka iyo daydo qabsiga sii kordheysa xaaladaha caalamka.
Talada kama dambaysta ahi waa aasaas iyo fududaan; Waa inaad barataa inaanad wax baran. Ilaa xadkeennu helno xirfado isbeddel ah, waxaan awoodi doonaa inaan helno natiijooyin wanaagsan oo aan ku habboonayn isbeddellada, laakiin sidoo kale inaan ujeedooyinkeennaba ka dhigno mid hubaal ah; noqo sida ugu sarraysa sida dimuqraadiyeynta aqoonta ama aasaasiga ah sida jiilka lacagta.
Post Previous«Previous Waa maxay gvSIG version 2.0 cusub
Post Next MundoGEO # Connect 2013, wax walbana waa diyaarNext »